Xiaomi dia manambara ny sary voalohany an'ny Xiaomi Mi Band 3 | Androidsis
Xiaomi dia lasa iray amin'ireo marika mahomby indrindra amin'ny tsena azo itondra. Ny ampahany lehibe amin'ny fahombiazany dia noho ny Mi Band, izay antenaina faingana ny fahatelo. Ny tale jeneralin'ny marika sinoa tenany no nitondra izany nandritra ny fampisehoana ny Black Shark, izay nahatonga ny honohono hitombo. Ankehitriny, ny orinasa mihitsy no manomboka manambara ny Xiaomi Mi Band 3.
Hatramin'ny namoahan'izy ireo sary voalohany tamin'ny tambajotra sosialy. Ao anatin'io no ahitantsika ampahany lehibe amin'ny famolavolana an'ity Xiaomi Mi Band 3 ity. Ka afaka manana hevitra mazava tsara momba izany isika. Ho avy tsy ho ela ny famotsorana azy.
Ny famolavolana ny fehin-tànana vaovao amin'ny marika sinoa dia hanaraka ny làlana napetrak'ilay teo alohany. Ka tsy mahita bokotra ara-batana isika. Hitady efijery mikasika hampiasana azy fotsiny isika. Ao amin'ny sary etsy ambany dia manana ny volavolan'ny Xiaomi Mi Band 3 isika.
Azonao an-tsaina ve izany? pic.twitter.com/EstUJDUIff
- Mi (@xiaomi) Aprily 29, 2018
Mbola kely ny antsipiriany momba io bracelet io. Fantatra fa iray volana mahery lasa izay dia nahazo ny fanamarinana Bluetooth izy, manokana, efa voamarina amin'ny Bluetooth 4.2. Ka fantatray izay kinova tokony hampiasaina. Saingy mbola tsy nisy antsipiriany fanampiny naseho hatreto.
Na dia azo inoana aza Amin'izao fotoana ananantsika ny sary ofisialy voalohany an'ity Xiaomi Mi Band 3 ity dia hanomboka tsy ho ela ny antsipiriany bebe kokoa momba izany.. Tokony havoakany tsy ho ela koa ny daty hanehoana azy io na amin'ny fotoana hamelezany ireo magazay.
Amin'ity bracelet ity, ny marika sinoa dia mikasa ny hanamafy ny fahombiazany amin'ny tsenan'ny entina entina, izay iray amin'ireo orinasa mivarotra indrindra. Araka ny angon-drakitra ny faharoa aorian'ny Apple. Ka ilaina ny mijery raha mahavita manatsara kokoa ireo varotra ireo ity Xiaomi Mi Band 3 vaovao ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Xiaomi dia mampiseho ny sary voalohany an'ny Xiaomi Mi Band 3
kerheol dia hoy izy:
Nihatakataka ianao, sa tsy izany? Mi Band 2 ny sary
Valiny amin'ny kerheol
Ny sary fonony dia an'ny Mi Band 2, ao anatin'ilay lahatsoratra dia misy ilay navoakan'i Xiaomi momba ny Mi Band 3. Fa ovako ny sary fanakonana, hisorohana ny fikorontanana! Misaotra anao tamin'ny hevitrao 🙂
Ilay iray tao amin'ny Twitter no tiako horesahina. Xiaomi mihitsy no nilaza fa avy amin'ny Mi Band 2 izany raha tsy diso aho.
Tsy ho ela dia avela hangina ireo mpampiasa ny Instagram
Ny Huawei P20 Pro no be mpividy indrindra any Eropa Andrefana